Ii-acrylic Sheets abavelisi kunye nabanikezeli-China iAcrylic Sheets Factory
I-acrylic ifumaneka ngaphezulu kokucacileyo! Imakhishithi enemibala ye-acrylic ivumela ukukhanya ukuba kudlule nge-tint kodwa akukho kusasazeka. Izinto zinokubonwa ngokucacileyo kwelinye icala njengefestile enombala. Ilungele iiprojekthi ezininzi zoyilo. Njengazo zonke ii-acrylics, eli phepha linokunqunyulwa ngokulula, lenziwe kwaye lenziwe. UDhua unikezela uluhlu olubanzi lweePlanga zePlexiglass Acrylic Sheets.
• Iyafumaneka kwi-48 ″ x 72 ″ / 48 ″ x 96 ″ (1220 * 1830 mm / 1220 × 2440 mm)
• Ifumaneka kwi -031 ″ ukuya kwi-.393 ″ (0.8 - 10 mm) ubukhulu
• Iyafumaneka ngombala obomvu, o-orenji, tyheli, luhlaza, mdaka, blue, blue bumnyama, mfusa, mnyama, mhlophe kunye nemibala eyahlukeneyo
• Sika ubungakanani bokwenza ngokwezifiso, ukhetho lobungakanani obukhoyo
• I-3-mil ye-laser-cut film enikezelweyo
• Ukhetho lokutyabeka okunganyangekiyo kwi-AR luyafumaneka
I-Crystal icacile, iyabonakala kwaye ayinambala, eli phepha le-acrylic lihambelana kakhulu kwaye lilungele phantse nasiphi na isicelo. Yindlela eyaziwayo kwiglasi ngenxa yobunzima bayo bokukhanya kunye nokuchasana nefuthe elikhulu. Njengazo zonke ii-acrylics, eli phepha linokunqunyulwa ngokulula, lenziwe kwaye lenziwe. I-Donghua ikakhulu ibonelela ngephepha le-acrylic elikhutshiweyo elifumaneka kwiimakhishithi ezigcweleyo, ukusika ukuya kubungakanani beemakhishithi ngobukhulu obahlukeneyo, amabakala kunye neemilo.
• ubukhulu besiko, ubukhulu kunye nombala nazo ziyafumaneka
Izithintelo ze-phuaiglass esemgangathweni ye-Dhua yindlela elungileyo yokukhusela abasebenzi bakho kunye nabathengi kwiibhaktheriya ezihamba ngomoya kunye neentsholongwane ezisasazeka ngokuthimla okanye ukukhwehlela. Ezi paneli ze-plexiglass ziyavela kuyo yonke indawo-kwii-cubic zeofisi, kwindawo yokubala ezivenkileni nakwiivenkile zokutyela, kwiiofisi zoogqirha- kuyo yonke indawo abantu bayasebenzisana ubuso ngobuso.
• Qina kwaye uzinzile
• Ubungakanani ngokwezifiso, uyilo kunye nemizobo ziyafumaneka